Orvoka Orlistat Ravina (96829-58-2) - Manufacturers Phcoker Chemical
SKU: 96829-58-2 Sokajy: Weight Loss
Ny Orsa Powder Orlistat dia ao anatin'ny kilasin'ny fanafody antsoina hoe inhibitors amin'ny lipase izay miasa amin'ny fanakanana ny famoahana ny 25% ny siramamy ao amin'ny sakafo ary ampiasaina amin'ny fahaverezan'ny lanja amin'ny olon-dehibe be loatra, 18 taona na mihoatra, rehefa ampiasaina miaraka amin'ny kaloria sy sakafo matavy loatra. Ny vovony Orlistat Raw dia zava-mahadomelina natao hiarovana ny vatana. Ny asany voalohany dia misakana ny fihinanana tsaramaso avy amin'ny sakafo fihinan'ny olombelona, ​​ka hampihena ny fihinanana kalorie. Vokatry ny ravina Orlistat dia manakana ny fanavahana ny pancreatic, ny enzyme izay mamoaka triglycerides ao anaty tsina. Raha tsy misy io biby io, dia tsy afaka ny hodiovina amin'ny asidra matavy be loatra ny triglycerides avy amin'ny fihinanana sakafo, ary tsy voavonjy. Ny Orsa Powder Prescription Oroka dia ampiasaina amin'ny olona be loatra izay mety ho voan'ny aretin-koditra, diabeta, kolesterola avo, na aretim-po. Ny fahombiazan'ny vovobony Raw Orlistat amin'ny fampiroboroboana ny fatiantoka dia fombafomba fa maotina. Ny angona azo avy amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana dia milaza fa ny olona nanome ny vovo-dronono Raw Orlistat, ankoatra ny fanovàna fomba fiainana, toy ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena, dia mahavaky ny 2-3 kilao (4.4-6.6) izay mihoatra noho ireo tsy mandray ny zava-mahadomelina mandritra ny herintaona. Vokatry ny tsimokaretina Orlistat dia manamaivana ny tosidran'ny tsiranoka ary toa manakana ny fanombohan'ny diabeta 2 karazany, na amin'ny fahaverezan'ny vatany na ny vokany hafa. Izany dia mampihena ny lanjan'ny diabeta II II amin'ny olona izay manadino ny habetsaky ny fiovan'ny fomba fiainana.
Orlistat dia karazana lipase izay manelingelina ny fidiran'ny rongony ary ny vokatra azo avy amin'ny lipostatin. Ny Orlistat dia manakana ny sela mipetaka sy ny pancreatic lipase, ary tsy misy fiantraikany amin'ny endri-pamoretana hafa (tahaka ny amylase, trypsin sy chymotrypsin) ary ny phospholipase, ary tsy misy fiantraikany amin'ny fihenan'ny kôrihydrate, proteinina sy phospholipida. Io fanafody io dia tsy voakosoka na dia ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinalina aza ary misy fiantraikany mivadika amin'ny lipase. Orlistat dia manafoana enzymes amin'ny fatorana mifanaraka amin'ny tsiranoka serine amin'ny tranokala mivezivezy sy lipase amin'ny pancreatic. Izany dia manakana ny siramamy amin'ny sakafo tsy halefa amin'ny asidra maimaim-poana sy diacylglycerol, noho izany tsy azo alaina, mampidina ny tsimokaretina kalorika ary noho izany mifehy ny lanjan'ny vatana. Ity medikaly ity dia tsy voatery halefa amin'ny vatana manontolo hampiharina. Ny areti-panafody Orlistat dia miankina amin'ny doka: ny fitsaboana dosage amin'ny Orlistat (120mg / d, tid, entina miaraka amin'ny sakafo), miaraka amin'ny kalozia ambany kaloria, dia mety hampihena hatramin'ny 30% ny fanangonana matavy. Ao amin'ny fianarana mampitaha ny mpirotsaka an-tsitrapo ara-dalàna sy ara-drariny, i Orlistat dia tsy nalain'ny vatana na dia kely aza. Taorinan'ny dosie iray am-bava (ny 800mg no lehibe indrindra), ny orana Orlistat ao anatin'ny ora 8 manaraka dia <5 ng / ml. Amin'ny ankapobeny, ny fitsaboana dosage amin'ny Orlistat dia vitsy kely noho ny vatana ary tsy manangona ao anatin'ny fotoana fohy. Ao anatin'ny fanandramana in vitro, ny taham-pandam-bolan'ny Orlistat amin'ny proteinina hafa dia mihoatra ny 99% (proteinina boribory dia lipoproteine ​​sy albumin indrindra), ary ny tahan'ny fifandraisana amin'ny rà mena dia tena ambany.
▪ Vao mainka manimba ny vatana ny Orlistat amin'ny 20% noho ny vidin'ny tavy
▪ Manampy anao i Orlista mba hianatra kaloria
▪ Mahatonga anao ho salama tsara i Orlista
▪ Misy vokany tsara ao Orlista, ka manome fahatokian-tena sy fifaliana ho an'ireo mpampiasa
▪ Manome valiny maharitra i Orlista
▪ Mampihen-danja ny aretina toy ny hypotension, diabeta, atherosclerose ary ny Orlista
Satria ny vovon-tsolika Orlistat dia naseho mba hampihenana ny fiterahana vitaminina matavy sy betacarotene, tokony homena torohevitra ny olona mba hitondra ny multivitamin misy vitaminina matavy be loatra mba hahazoana sakafo mahasalama. Ankoatr'izay, ny vitaminina fanampiny dia tokony halaina farafahakeliny ora 2 mialoha na aorian'ny fitantanana ny vovon-tsolika Orlistat, toy ny amin'ny fotoana fatoriana.
Orlistat ho an'ny fatiantoka mavesatra: Ahoana no ahafahana manala ny volo vitany?
Fandotahana matanjaka sy fitsaboana, natontan'i Armand B. Christophe, Stephanie R. De Vriese, Stephanie DeVriese, pejy 426- 437.
Fandrosoana ao amin'ny Fikarohana momba ny fiterahana: 9, natontan'i Geraldo Madeiros-Neto, Alfredo Halpern, Claude Bouchard, pejy 1046.
Ny fahosana sy ny fitantanana ny vatana amin'ny fitaterana ny kilonga - Nataon'i Colin Waine, Nick Bosanquet, pejy 68-71.